जितु नेपाल (मुन्द्रे)सँगको कुराकानी :: फिल्मनेपाल डट कम
हास्य अभिनयको क्षेत्रमा मुन्द्रे उपनामले परिचित नाम हो, जितु नेपालको । डेढ दशकभन्दा लामो समयदेखि दर्शकलाई हँसाइरहेका जितुले दर्जनौं टेलिफिल्ममा अभिनय गरेका छन् । 'ट्वाक्क टुक्क' टेलिश्रृखंलामार्फत हास्य कलाकारको रुपमा पर्दामा स्थपित भएका जितुलाई अहिले दर्शकले 'जिरे खुर्सानी'को मुन्द्रे भनेर चिन्छन् । सटिक व्यंग्यमार्फत दर्शकलाई पेट मिचिमिचि हँसाउने जितुले थुप्रै चलचित्रमा कमेडी भूमिकामा खेलेका छन् । उनी 'के साइनोले बोलाउँ' सिनेमामा मुख्य भूमिकामा समेत देखिएका थिए । तैपनि ठूलो पर्दामा जम्न सकेनन् ।
टेलिसिरियलमै बढी समय बित्छ । त्यसबाहेक दुईवटा एफएममा कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्छु । विज्ञापनमा समेत खेल्ने गरेको छु । चारपाँच ठाउँमा काम गर्दा दिन व्यस्ततामै बित्छ ।
यतिका ठाउँ काम गरेपछि पैसा त खुबै कमाउनुहुन्छ होला, होइन ?
राम्रै हुन्छ । ठ्याक्कै यति नै भन्ने त छैन । तर आफ्नै कमाइबाट घर बनाएँ । परिवार पाल्न मज्जाले पुगेको छ ।
मान्छेले मुन्द्रे भनेर बोलाउँदा रिस उठ्दैन ?
कहाँ रिस उठ्नु ? झन् रमाइलो लाग्छ । काम अनुसार मान्छेले मूल्यांकन गर्दारहेछन् जस्तो लाग्छ । कम्तीमा मेरो कामबाट मानिस प्रभावित रहेछन् भन्छु ।
तैपनि जितु नेपाल भन्ने वास्तविक परिचय गुमेको अनुभूति हुन्छ होला नि कहिलेकाहिं ?
हुँदैन । मेरो क्षमता, खुबी जुन हो त्यो पो मेरो वास्तविक परिचय हो । त्यसैद्धारा मानिसले मलाई चिन्दा बढी आनन्द पो लाग्छ ।
फरक प्रसंग, थुप्रै फिल्ममा हास्यकलाकारको रुपमा खेल्नुभयो । तर पछिल्लो समयमा ठूलो पर्दामा देखिनुहुन्न नि ?
एक त फुर्सद पनि छैन । नढाँटी भन्दो कसैले अफर पनि गरेको छैन । तेस्रो कुरा नेपाली सिनेमा निर्माणको धारमा खासै परिवर्तन पनि आएन । त्यही भएर म टेलिफिल्ममै रमाएको हुँ ।
चलचित्र निर्माणमा परिवर्तन आएन भन्नुभयो, कसरी ?
हिजो जसरी फिल्म बनिरहेका थिए त्यही कुराको मात्रै निरन्तरता छ । व्यंग्यात्मक फिल्म खासै बनेकै छैनन् । सूत्रमा हिजो जसरी फिल्म बन्थे आज पनि खासै अन्तर आएको छैन । जसले गर्दा कमेडी भूमिका गर्ने हामीजस्ता कलाकारका लागि सिनेमामा भूमिका छैन ।
तर नेपाली फिल्ममा नयाँ कलाकार, निर्देशकको आगमनले फिल्म निर्माणको परम्परालाई तोड्दैछन् भनिन्छ नि ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । केही फिल्मले राम्रै गर्न खोजे । एकप्रकारका फिल्म हल्का चलिरहेछन् अहिले । कहिले हलमा फिल्म हेर्न नजानेहरुलाई पनि यी फिल्मले हलसम्म पुर्‍यायो भनिन्छ । तर मुख्य कुरा दर्शकले कस्ता कुरा हेरिरहेछन् भन्ने हो । छाडा, भल्गर फिल्म हेर्ने दर्शक बढे भनेर मख्ख पर्नुपर्ने स्थिति छैन । यो त झनै दयनीय हो । प्रचारप्रसार पनि त्यही ढंगले गरिएको छ । यसले तत्काल दर्शकलाई तान्ला तर दीर्घकालीन रुपमा गलत असर देखिने छ । हलमा फिल्म हेर्न समेत त्यही स्तरका दर्शक जान्छन् । फिल्म चल्यो भनेर मात्रै भएन । हामीले कतिसम्म हेर्ने ? यस्ता कुराले फिल्मको गुणात्मक पक्षलाई भने घाटा हुने देखिन्छ ।
दर्शकले मन पराएपछि राम्रै मान्नुपर्‍यो नि ?
मैले भनिसकें कस्ता दर्शकले के कुरा हेर्दैछन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । आफूले के हेर्दैछु भन्ने कुरा उनीहरुलाई थाहा पनि हुनुपर्‍यो । अहिले बनिरहेका फिल्मले केही नयाँ गर्न खोजे तर पैसा यसैबाट कमाइदोरहेछ भनेर छाडापन भित्र्याए । जुन समग्रं फिल्म उद्योगको लागि राम्रो संकेत होइन ।
यस्तो ट्रेन्डले नेपाली फिल्म उद्योगलाई कतातिर लैजाला ?
फिल्म क्षेत्र भन्नसाथै बद्नाम थियो, हिजो । बीचमा यो सोचमा केही सुधि्रयो । तर फेरि यस्तो छाडापनले फिल्म क्षेत्र भनेको बिगि्रएको क्षेत्र भनेर मान्छेले टिप्पणी गर्छन् । त्यसको असर यहाँभित्रका राम्रा कलाकार, निर्देशकलाई पर्छ । अनि पुनः फिल्म क्षेत्र नै धराशयी हुन बेर छैन । बेलैमा सबै सचेत हुनु जरुरी छ ।
सानो पर्दामा मात्रै अल्मलिएँ भनेर यसबाट ठूलोमा फड्को मार्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मनमा आउँदैन ?
आउँछ । तर टेलिफिल्मबाट वाक्क भएर होइन । तैपनि कसैले ल है यस्तो फिल्म बनाउँदैछु अभिनय गर्नुपर्‍यो भनेर भनेको छैन ।
पैसा पनि कमाइहाल्नुभयो । आफैं फिल्म बनाएर यो रहर मेटाउने मन छैन ?
सोचिराखेको छु । अब आफैं बनाएर खेल्छु । अलिक समय भने लाग्ला ।